Rasoloniaina Miharisoa Hisahana ny zon’olombelona eo anivon’ny HAFARI
Tsy hisahana ny resaka zon’olombelona eo anivon’ny Hafari Malagasy intsony Rafanomezantsoa Jean Nirina filoha mpanorina.
Andraikitra hafa mihitsy no hosahaniny manomboka izao dia ny fiarovana ny zon’ny voafonja eto amintsika amin’ny alalan’ny famolavolana tolo-dalàna hoentina eny amin’ny Antenimieram-pirenena hanatsarana an’izany. Rasoloniaina Miharisoa no voatendry ho filoha nasionalin’ny Hafari Malagasy hisahana ny zon’olombelona. Nilaza izy omaly teny Mamamba fa matoa misy ny fanovana dia hisy ihany koa ny fanatsarana entina hanomezana fahafaham-po ny mpiarabelona. Ho an-dRafanomezantsoa Jean Nirina kosa dia hahazo vahana ato ho ato ny fanatanterahana ilay tetikasa fananganana tanàna vaovao hiarahana amin’ny Ong Madasun tarihan’ny injeniera mpikaroka Ramananarivo Olivier, hahafahana miady amin’ny fahantrana sy ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina hahafahana mamatsy ireo tanàna tsy mahazo herinaratra. Nasehon’izy ireo omaly teny Mamamba Ambohibao ireo fitaovana ilaina amin’ny famokarana angovo dia ny « Micro hydraulique autonome » izay ezahina haparitaka manerana ny Nosy. Ny rano hatreto no akora fototra hampiasain’izy ireo. « Raha tsy misy fahazavana tsy hisy fampandrosoana », hoy ity injeniera ityAny Morarano Gara Moramanga no hanehoany izany voalohany hamokarana 1200KVA hahazoan’olona miisa 2.810 tombontsoa.